Maitiro Ekuwana Iyo "Vhidhiyo Ini Yandinoda" Sarudzo PaYouTube? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Vateveri ▷ ➡️
Tenga Vateveri 😍
Vateveri ve Instagram
Tik Tok Vateveri
Maitiro ekuwana iyo "Vhidhiyo ini yandinoda" sarudzo paYouTube?
Dai 12, 2021 0 mashoko 537
Iyo yeYouTube chikuva inosanganisira iyo sarudzo iyo inotibvumira kuti tione yakakwana runyorwa rwevose mavhidhiyo ataka "farira". Kuti uwane urwu runyorwa, isu tinongofanirwa kubaya pane bhatani "Mavhidhiyo andinoda" mumenyu huru.
Asi kana iwe usingazive nzira yekuwana iyi sarudzo Tinokukoka iwe kuti uverenge chinyorwa chinotevera apo isu tichakuratidza iwe nhanho nhanho iwe yaunofanirwa kuteedzera kuti uone runyorwa rwemavhidhiyo aunofarira pane yako YouTube account.
Matanho ekuwana sarudzo "Mavhidhiyo andinoda"
Vashandisi vepuratifomu yeYouTube vanozokwanisa kuisa runyorwa rwemavhidhiyo andinoda zvakanyanya kubva kudesktop vhezheni uyezve kubva kuchikumbiro chemafoni nhare. Muzviitiko zvese izvi maitiro ari nyore uye anokurumidza.
Maitiro 1: Kubva kudesktop vhezheni
Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi mavhidhiyo awaka "farira" paYouTube? Unogona kuzviita nenzira yakapusa kubva kudesktop vhezheni yeiyi inozivikanwa kufambisa vhidhiyo chikuva.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndechekuti pinda papuratifomu yeYouTube kubva pakombuta yedu. Iwe unongofanirwa kuvhura iyo bhurawuza uye nyora inotevera webhu kero www.youtube.com
Kamwe mukati meplatform isu tinofanirwa pinda ne email yedu uye password. Iye zvino tinodzvanya pamitsetse mitatu yakatwasuka inoonekwa kumusoro kwekuruboshwe kwechidzitiro uye tinobaya pane sarudzo "Raibhurari"
Pakupera peji iwe unowana chikamu chine musoro wenyaya "Mavhidhiyo andinoda". Ikoko runyorwa rwakakwana ruchaonekwa pamwe nemavhidhiyo ese awa "farira" mukati mepuratifomu. Kuti uwane iyo yakazara runyorwa iwe unofanirwa kungodzvanya pane "Ona Zvese".
Dzvanya pa "Mavhidhiyo andinoda"
Pane nzira iri nyore uye yakatwasuka kuwana runyorwa rwemavhidhiyo andinoda mukati meYouTube. Pano tinokutsanangurira iwe:
tinya pamusoro pemitsara mitatu yakatwasuka (kona yekumusoro kuruboshwe)
Dzvanya pane sarudzo "Mavhidhiyo andinoda"
Kugadzirira. Iwe unenge watowana kare runyorwa rwe ese mavhidhiyo aunofarira mukati mepuratifomu.
Maitiro 2: Kubva pane nharembozha
Vashandisi vanowanzo pinda YouTube kubva kune nharembozha vanogona zvakare kuwana iyo runyorwa rwemavhidhiyo akafarirwa mukati mepuratifomu. Heano ma matanho ekutevera:
Chekutanga pane zvese iwe unofanirwa vhura iyo Youtube application pafoni yako. Muchiitiko chekusave neyakavhurika chikamu, ingo taridza yako email uye password.
Mukona rezasi rerudyi rwechidzitiro uchawana sarudzo ine zita rekuti "Library". Iwe unozofanirwa kudzvanya ipapo kuti uwane runyorwa rweazvino mavhidhiyo uye zvinyorwa zvekutamba.
Pazasi iwe unowana sarudzo "Mavhidhiyo andinoda". Kuibaya ichavhura peji neese mavhidhiyo eYouTube aunofarira.
1 Matanho ekuwana sarudzo "Mavhidhiyo andinoda"
2 Maitiro 1: Kubva kudesktop vhezheni
3 Dzvanya pa "Mavhidhiyo andinoda"
4 Maitiro 2: Kubva pane nharembozha
Tsamba dze Instagram kuti uteme uye unamate
Dai 12, 2021
Ungachinja sei account yebhizinesi kuita yako wega paPinterest?
Ini ndinodzima sei kana kuita yangu account yePinterest?
Vateveri ve Instagram $0.00
Twitter Vateveri $0.00
Tik Tok Vateveri $0.00
Facebook Vateveri $0.00
Vanyoreri veYouTube $0.00
Tsamba dze Instagram kuKopa uye Pasita
Kuve akakurumbira nemazita aya makuru e Instagram
Pinda ku Instagram pasina kodhi yekodhi
Kana Instagram ichikuudza iwe mushandisi haina kuwanikwa
Instagram Vanoteera Jenareta